मकैको जुंगाले आधा दर्जन रोग निको भएपछि चिकित्सक नै छक्क, यसरी बाँडे आफ्नो अनुभव (भिडियो हेर्नुस) « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । मकै नखाने नेपाली सायद कम नै होलान् । मकै संसारमा सबै भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा लगाईने तथा सबै भन्दा धेरै खपत हुने बाली भएकाले मकै नखाने विश्वमै सायद कम होलान् । हरियो मकै पोलेर, भुटेर खान निकै मिठो हुन्छ । काठमाडौंको सडकमा पोलेका मकै जताततै पाइन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ ? हरियो मकैको जुंगा हाम्रो शरिरको लागि कति लाभदायक छ ? त्यसै खेर फालिने मकैको जुँगा पनि एकदमै काम लाग्छ ।
चिकित्सकका एक जोडी जसले मकैको जुँगा प्रयोग गरेर आफ्ना धेरै रोग निको पारे । उनीहरु अनेक अस्पताल धाए तर निको भएन । चिकित्सकले पनि उपचार सम्भव नभएको भन्दै घर फर्काइदिए । तर मकैको जुंगाको प्रयोगले उनीहरुको रोग केही दिनमै निको भयो । चमत्कारीक रुपमा रोग निको भएपछि उनीहरुले भिडियो सार्वजनिक गरेर त्यसवारे जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले भनेजस्तै मकेको जुँगावाट निम्न रोगको उपचार गर्न सकिन्छ ।
मकैको जुँगामा एन्टी इन्फ्लेमेटोरी तत्वहरू पाइने हुदा मकैको जुँगाको सेवन पिसाब नलीको स ङ्क्रम णमा धेरै लाभदायी हुन्छ् । यसले पिसाब नलीको तहलाई सुरक्षा कवच प्रदान गरेर पोलाइलाई कम गरिदिनुका साथै सङ्क्रमणलाई पनि निको पार्ने काम गर्छ ।
मकैको जुँगाको चियाले पिसाब लगाउने भएको कारण यसको नियमित सेवनले मिर्गौलामा पत्थर बन्ने सम्भावना पनि न्यून बनाइदिन्छ । ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, यसले पत्थरी बन्न दिँदैन तर पहिल्यै पत्थरी भइसकेको छ भने त्यसको उपचारमा चाहिँ यो काम लाग्दैन । उच्च रक्तचापको समस्या विश्वव्यापी रूपमै एउटा ठूलो नसर्ने रोगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । उच्च रक्तचापको एउटा विन्दुमा पुगेपछि अनिवार्य रूपमा औषधिको सेवन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर मकैको जुँगाको चिया नियमित रूपमा सेवन गर्ने हो भने त्यसले उच्च रक्तचापलाई पनि घटाइदिने गर्छ ।
इन्टरनेसनल जर्नल अफ बायोलोजिकल्ली काक्रोमोलेक्युल्समा सन् २०१२ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानात्मक लेखका अनुसार मधुमेह भएका मुसालाई प्रयोगशालामा मकैको जुँगाको तत्व निकालेर सेवन गराउँदा तिनको र’गतबाट चिनीको मात्रा घटेको पाइएको थियो ।
र’गतमा खराब कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नु र त्यो अनियन्त्रित हुँदै जानुको एउटै परिणाम हो, विभिन्न घा’तक मुटुरोगहरू पैदा हुनु । त्यसैले मुटु रोगबाट बच्न गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमध्येका पनि प्रमुख कार्य हो, र’गतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रित राख्नु ।
मोटोपन आजभोलि आम समस्या बन्दै गइरहेको छ । मोटोपनका कारणहरू विभिन्न हुन्छन् र तीमध्ये एक शरीरमा पानीको मात्रा बढी सञ्चिति हुनु पनि हो । यो खालको मोटोपन घटाउनमा चाहिँ मकैको जुँगाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । खासगरी, मकैको जुँगाले शरीरमा अनावश्यक जम्मा भएको पानी र विकारहरूलाई हटाउने काम गर्छ ।